मधेसवादी दुई दलका उम्मेदवारहरु मैदानमा | चितवन पोष्ट
गृह » मधेसवादी दुई दलका उम्मेदवारहरु मैदानमा
मधेसवादी दुई दलका उम्मेदवारहरु मैदानमा
भरतपुर । मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरुमध्ये चितवनमा उम्मेद्वारी दिने दलहरु दुईवटा रहेका छन् । विभिन्न छ मधेसवादी दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट चितवनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रेका छन् ।
राजपा, नेपालले आफूलाई राष्ट्रियस्वरुपको पार्टी बनाउन नखोजेको हैन तर यसमा विगतमा मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेता र दलहरु नै छन् । त्यस्तै पहिलो मधेस आन्दोलनबाट उदाएका नेता उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले पनि आफूलाई राष्ट्रियस्तरकै दल भन्न थालेको छ ।
फोरमले चितवनका सबै तीन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारहरु उठाएको छ । राजपाले दुई क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ । फोरमले प्रदेशसभामा एकजना मात्रै उम्मेदवार उठाएको छ । राजपाले पनि प्रदेशसभामा एकजना मात्रैलाई मैदानमा उतारेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले प्रतिनिधिसभाका लागि चितवनको क्षेत्र नं. १ मा मनोजकुमार पोखरेललाई उठाएको छ । क्षेत्र नं. २ मा गणेश गिरी र क्षेत्र नं. ३ मा अजय ठाकुर हजामलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेशसभामा फोरमले चितव क्षेत्र नं. २ को खमा जयराम रम्तेल (सार्की)लाई उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राजपाले प्रतिनिधिसभाका लागि चितवन क्षेत्र नं. १ मा अर्जुनप्रसाद बर्तौलालाई उठाएको छ । सो पार्टीले चितवन क्षेत्र नं. २ मा रीता चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राजपाले प्रदेशसभा सदस्यका लागि चितवन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश ‘क’ मा राजकुमार बर्तौलालाई उठाएको छ । मधेस केन्द्रित भनेर चिनिने दलमध्ये चितवनमा फोरमका पाँच र राजपाका तीन गरेर कुल सात उम्मेदवार छन् ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्म चितवनमा मधेस केन्द्रित दलहरुको उम्मेदवार धेरै नै हुन्थे । राजपा गठनपछि मधेस केन्द्रित दलहरुको संख्या कम भएको छ । त्यस्तै विजय गच्छादार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा बिलय भएको छ । त्यसैले यो पटक मधेस केन्द्रित दलहरुको संख्या र उम्मेदवारहरु कम भएका हुन् ।
राजपा, नेपालको चुनाव चिन्ह छाता रहेको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको चुनाव चिन्ह हातले समातेको मसाल हो । सोही चुनाव चिन्ह लिएर पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति नेपालका उम्मेदवारहरु मैदानमा थिए । अहिले नयाँ शक्तिको चुनाव चिन्ह देब्र आँखा रहेको छ । नयाँ शक्तिका उम्मेदवारहरु पनि चितवनमा प्रतिनिधिसधा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार छन् ।